Ndivanaani vatengesi vepasi rose? | ECommerce nhau
E-commerce yaunza pamwe nekuvandudzwa kwemakambani mazhinji, ayo anoda kugadzirisa shanduko uye tekinoroji, makambani senge Costco, Target, Lowe's, ndiwo makambani anga ari mumusika kwemakore mazhinji, asi akazopedzisira adonha kumashure nekuda kwe e-commerce kuwedzera, asi zvakanaka ndezvekuti idzi uye nedzimwe dzakawanda kambani ye "chitoro"Kana kuti kutengesa kwave kuchivandudza uye kusvika pari zvino kune akawanda acho ivo vanotonga pamusika wekutengesa.
1 Tevere isu tichazivisa kuti ndeapi makambani makuru "ekutengesa" pasi rose.
1.1 Zvitoro zveWal-Mart
1.2 The Home Depot
Tevere isu tichazivisa kuti ndeapi makambani makuru "ekutengesa" pasi rose.
Pari kure kambani hombe mu chitoro iyo iriko nhasi, haizi kuzivikanwa chete pasirese, asi zvakare ine akati wandei masisitendi epasi rose, ine purofiti inosvika inodarika mabhiriyoni gumi nematanhatu emadhora, Wal-Mart zvakare ine yayo e-commerce saiti munzvimbo dzakasiyana dzepasi.
Yakavambwa mu United States mudunhu reA Arkansas muna 1962, Zvitoro izvi zvinopa zvigadzirwa, kubva pakudya, kusvika kuzvipfeko, zvishandiso, mabhuku, zvekuvhima nemidziyo yekuredza, chikafu uye zvekushandisa zvezvipfuyo, kukhemisi uye mhando dzakasiyana dzezvizoro. Ndiyo kambani hombe pasi rese maererano ne “retailers”Zviri kunetsekana.
Iyi kambani yekutengesa ndeimwe yeakakura kwazvo kana zvasvika pakuvaka zvinhu, kugadzirisa dzimba uye DIY. Iyi kambani yekutengesa ndiyo nhamba yekutanga munyika ye DIY, ichiteverwa nevamwe zvitoro zvekutengesa sezvavari Lowe uye OBI, iine muzvitoro zvinodarika zviuru zviviri muUnited States, Canada, Mexico neChina.
Kunze kwekuve neiyo e-commerce peji uko vanhu vanobva kumatunhu akasiyana vanogona kuwana, kutsvaga uye kutenga mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa kusimudzira dzimba dzavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Ndivanaani vatengesi vepasi rose?
Chii chandingatenga kuburikidza nePure Player makambani?